PinePhone ine mufananidzo unowanikwa kune multiboot ine 13 distros | Linux Vakapindwa muropa
Zvirokwazvo munhu wese anoziva nezve iyo "dualboot" kana maviri mavambo. Mushure mekuita zvimwe kana zvishoma matanho (zvimwe mushanduro dzekupedzisira dzeWindows), tinogona kumhanyisa maviri masisitimu anoshanda pakombuta imwe chete. Dos hapana kana ichienzaniswa neicho p-bhuti chishandiso chinotibvumidza isu kuti tiite, unova mufananidzo unotibvumidza isu kuti tiite multiboot pane iyo PinePhone. Zvakawanda zvakapfuura maviri, asi chinoshamisira huwandu hwenharaunda dziripo uye, kunyanya, huremu hwadzo.
Mufananidzo wacho une huwandu hwe 13 kugoverwa yaunayo mushure mekucheka, asi ndeyekuti, kunyangwe imwe neimwe ichifanira kuyera padhuze kana kupfuura 1GB, uyu mufananidzo unorema anenge 5GB, saka isu tinongoda chete 8GB microSD kuti tikwanise kuishandisa. Izvi zvinogoneka nekuti vese vanoshandisa iyo imwechete kernel, iyo Linux 5.9 yakagadzirirwa kushanda nePINE64 PinePhone. Midziyo yakatsigirwa zviriko zvese, kubva kuiyo Braveheart edition kune nyowani iwo atove ne3GB ye RAM uye 32GB yekuchengetedza.
1 Distros inowanikwa mup-boot yePinePhone
2 Inonakidza, asi mubeta
Distros inowanikwa mup-boot yePinePhone
Muvhuro OS 0.113
pmOS / Plasma Nhare 2020-09-11
Ubuntu Bata 2020-09-10
Kana ikasanzwika saizvozvo, pmOS ndizvo postmarketOS, imwe yesarudzo dzakanakisa dzinowanikwa nenzvimbo dzakasiyana siyana kana nzvimbo dzinopindirana, senge Phosh inonyanya kuzivikanwa (yakavakirwa paGNOME) kana Plasma Mobile. Kana vari vamwe vese, ini ndakavaedza paPineTab, ini ndaizosimbisa Mobian neArch Linux, sezvo vari vaviri eayo anoshanda zvakanyanya.
Sezvatakataura, ivo vese vanogovana imwechete kernel, a Linux Linux -5.9 iyo yakavhurwa Svondo rapfuura iyo yechi 13. Izvi, mukufunga, zvichaita zviripo Ubuntu Kubata zvinoshanda zvirinani pane iyo vhezheni inouya nekumisikidza neUBports PinePhone ine Ubuntu Kubata, asi zvese mune dzidziso.
Inonakidza, asi mubeta
Kana iwe uchifarira kuyedza p-bhutsu, unogona kurodha pasi mufananidzo kubva ku peji peji, uko iwe zvakare uine rumwe ruzivo. Kufunga izvo tichaita zvese mu microSD (kunyangwe ichigona kuiswa mundangariro dzemukati), haungarasikirwe nechinhu kupfuura nguva. Asi munguva yakatambiswa tinogona kunakidzwa nhare zhinji dzekuparadzirwa kweLinux, izvo zvinogona kutibatsira kuzviedza uye kuona kuti ndeupi watinonyanya kufarira, uye izvi zvinogona kutitungamira kuti tiise iyo vhezheni mundangariro dzemukati.
Sarudza zvaunosarudza, p-bhutsu Iyo inotibvumidza isu kumhanyisa kugovera gumi nematanhatu paPinePhone, uye ini pachangu ndiri kutarisira kwavari kuburitsa chishandiso chakafanana chePineTab. Chinhu chakashata chine piritsi ndechekuti iri nyowani uye inosanganisira imwe yakagadziridzwa mutyairi weLCD inoita kuti mashoma ekuparadzira ashande, kuwanikwa zviri pamutemo chete Mobian, Arch Linux ARM uye, kunyangwe hafu ichishanda (asi ichikurumidza uye kugadzirisa zvazvinoita), Manjaro. Hatigone kuti chinhu ichi hachivimbise.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kuseka bhutsu mbiri ne p-bhuti, chifananidzo chinokutendera kumhanya 13 distros! pane yako PinePhone
"Tinofanira kuchengetedza ARM": mubatsiri wekambani anoramba kutora